नेपाली रुपैयाँ डेढ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर, डलर बढ्दा के हुन्छ अर्थतन्त्रलाई नाफा/घाटा? – Aarthik Samachar
नेपाली रुपैयाँ डेढ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर, डलर बढ्दा के हुन्छ अर्थतन्त्रलाई नाफा/घाटा?
अमेरिकी डलर सर्वाधिक बलियो हुँदा नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि एक डलरको भाउ १२१ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकेको छ।
डलरको भाउ १७ महिनायताकै सबैभन्दा उच्चतम बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि २०७७ असार ९ गते अहिलेको उचाइमा पुगेको थियो। यद्यपि यो सर्वाधिक उचाइ भने होइन। डलरको भाउ २०७७ वैशाख १० गते सर्वाधिक उचाइमा पुगेको थियो। त्यो दिन डलर १२३ रुपैयाँ २४ पैसा पुगेको थियो।
भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसैसँग जोडिएर नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएको हो। भारुसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण भारु तल-माथि हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि प्रभावित हुन्छ। तीन महिनामा डलरको भाउ १० रुपैयाँ हाराहारीले बढिसकेको छ।
डलरको वृद्धिले निर्यात व्यापारलाई राहत मिल्ने छ। वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट हुने आम्दानीका साथै पर्यटन क्षेत्रको आयसमा समेत सुधार हुने छ। हस्तकला लगायत नेपाली समानका निकासीकर्ताको आम्दानी बढ्छ।
नेपालले ठूलो मात्रामा आयात गर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा तिरेर किन्न पर्ने सामान तथा सेवाहरु महँगो पर्ने छ। महँगो डलरमा आयातित सामान भित्रिने हुनाले मूल्यवृद्धिमा यसको चाप देखिने छ।